राजपाले एकीकरण नचाहेको समाजवादीको आरोप
समाजवादी पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण गर्न नचाहेको बताएका छन् । राजपाको वार्ता समितिका संयोजक तथा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टी सरकारमा भएसम्म एकता नहुने बताएकोले राजपा तत्काल एकीकरण नचाहेको प्रस्ट भएको छ ।
राजपा नेता महतो पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पटक पटक वार्ता गरी पार्टी एकीकरणको कुरा करिब करिब सकिएको बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्ला केही दिनयता अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले महतोलाई पार्टी एकीकरणबारे जानकारी दिन भनेपछि कुनै खास कुरा नभएको महतोले जनाएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बताएका छन् ।
राजपाका नेताहरूसँग आफूले पनि छलफल गरेको बताउने पार्टीका महासविच रामसहाय यादवले भने, “राजपाका नेताहरूसँग औपचारिक छलफल भइआएको छ । हामीले सरकारमा छाड्नुपर्ने शर्तमा वार्ता अघि नबढ्ने बरू पार्टी एकीकरण भएपछि हुने निर्णयका आधारमा सरकार छोड्ने बताएका थियौं । त्यही आधारमा अध्यक्षज्यूसँगको छलफल भएको हो । यो शर्त मानेर एकता गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।”
अध्यक्ष मण्डलका कतिपय सदस्यसँग महतोले सक्दो चाँडो एकीकरण गरेर जाने प्रयास गरेका थिए । तर अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरूलाई एकीकरणका बारे विश्वास प्राप्त गर्न महतो असफल भएका हुन् । उनले वार्ताका बारेमा आजभोलिमै भइहाल्ने गरी मिडियामा बोल्दै आएको भएपनि पार्टीका नेताहरूलाई केही जानकारी दिन सकेनन् ।
वार्ता समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लालले समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग आफूहरूको सामूहिक बैठक नबसेको बताए । कुनै नेता विशेषको बैठक भए आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिका नेता डा. शिवजी यादवले राजपाले पार्टी एकीकरण गर्न नचाहेको प्रस्ट भएको बताए । उनले भने, “सरकार छाड्नुपर्ने शर्त तेस्र्याएर पार्टी एकीकरण हुँदैन ।” डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले पनि पार्टी एकीकरणअघि सरकार छाड्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको थियो । त्यतिखेर पार्टी एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारमा बस्ने–नबस्ने निर्णय गरिने जनाइ पार्टी एकीकरण भएको थियो ।
नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि सरकार छोड्ने निर्णय गर्ने राजपाका नेताहरूको बुझाइ थियो । तर तत्काल सरकार नछोड्ने निर्णय गर्दै यो विषय पार्टीको पदाधिकारी समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । पदाधिकारी समितिले सरकार छाड्नुपर्ने राजनीतिक अवस्था देखेमा सरकार छाड्ने निर्णय गर्ने डा. यादवले जनाए ।
उनले भने, “पार्टीभित्र कुनै मतभेद छैन । पार्टी सरकारमा रहनु वा सरकार बाहिर बस्नु दुबै राजनीति हो । हामीले सरकारमा जाँदा राजनीति लिएर गएका थियौं । त्यो राजनीति पूरा नभई सरकारमा जाने कुनै आवश्यकता नभएको नेताहरूको भनाइ छ ।”
समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विषयमा सत्ताधारी पार्टीसँग छलफल गर्ने र त्यसअनुरूप अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको उनले जनाए । पार्टी एकीकरणका लागि खुला भएको बताउँदै डा. यादवले भने, “अब राजपाले पार्टी एकीकरण पछि पहल गर्ने जस्तो देखिन्छ ।”
तर, पार्टी एकीकरणको विषयमा आवश्यक राजनीति बने जुनसुकै बेला एकीकरण हुन सक्ने दुबै पार्टीका नेताहरूको भनाइ रहेको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव भारत भ्रमणमा गएका छन् । फर्केपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढे आश्चर्य मान्न नहुने राजपाका एक नेताले जनाए ।